Akụkọ - A na-ewebata usoro nke ọla ntụ ntụ na usoro anọ
Usoro nhazi nke ntụ ntụ bụ ntụ ntụ (nkwadebe na agwakọta) - ịpị ịkpụzi - nsị - ọgwụgwọ mgbe ị gwọchara ya.
A kọwara usoro a n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
1, nkwadebe nke ntụ ntụ gụnyere nkwadebe nke ihe: dịka ihe achọrọ si dị, dị ka ihe eji mepụta ya, wee gwakọta ngwakọta ahụ. ntụ ntụ na-ekpebi ọdịiche dị n'etiti ihe ndị ahụ jupụtara na ya ma na-emetụtakwa mmetụta ọ na-emetụta.Ọ ka mma iji ngwakọta ozugbo ma ghara ịhapụ ha ogologo oge.
2, usoro mmechi kwesịrị ịghọta mmechi usoro: mmechi otu ụzọ na mmechi ụzọ abụọ.N'ihi usoro ịpị dị iche iche, nkesa njupụta nke ngwaahịa ahụ dịkwa iche. ọkpọ ahụ na-abawanye, esemokwu dị na mgbidi dị n'ime nke ịnwụ na-ebelata nrụgide ahụ, njupụta ahụ dịgasị iche na nrụgide ahụ.
3. A na-agbakwunye ndị na-ete mmanụ na ntụ ntụ iji mee ka ịpị na ịpụpụ ha. ọdịiche dị n'agbata ntụ ntụ, ọ nwere ike, n'ụzọ megidere, igbochi njupụta nke ngwaahịa ahụ. ontchịkwa ikike ịhapụ ngwaahịa ahụ na-ezere ntụpọ elu nke usoro mmebi ahụ kpatara.
4. Na usoro ịpị, ọ dị mkpa iji gosi ịdị arọ nke ngwaahịa a, nke dị oke egwu, n'ihi na nrụgide nrụgide n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-eduga n'ọtụtụ nnukwu ibu, nke na-emetụta arụmọrụ nke ngwaahịa ikpeazụ. A ga-afuriri ngwaahịa nke fọdụrụ na ntụ ntụ na adịghị ọcha n'elu ngwaahịa ahụ ma tinye ya nke ọma na ngwa ahụ iji gbochie adịghị ọcha.